Large Diameter HDPE Solid Wall Pipe Extrusion Line - China Large Diameter HDPE Solid Wall Pipe Extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
Extruder dia andiany JWS-H Fahombiazana avo lenta, extruder visy tokana avo lenta. Ny famolavolana firafitra barika manokana dia manome antoka ny fitoviana mety tsara amin'ny maripana vahaolana ambany. Natao ho an'ny fantsom-pantsaka savaivony lehibe, ny lasitra famolavolana boribory dia misy rafitra fanamafisam-peo fantsom-pifandraisana anatiny. Raha atambatra amin'ny fitaovana kely ambany izy, afaka mamokatra fantsona matevina matevina amin'ny rindrina sy matevina. Ny fanokafana sy ny fanidiana ny fantsom-baravarankely misy dingana roa, ny fanaraha-maso sy ny fandrindrana ireo traktera crawler maromaro, ny fanapahana tsy misy chipika ary ny singa rehetra, a diplaoma automatique avo lenta. Ny traktera tariby tsy voatery atao dia afaka manao ny fiasan'ny kaliberaly lehibe
fantsona mety kokoa.